DataNumen Outlook Express Repair - Manafatra hafatra voarindra ao anaty fampirimana mailaka ao Outlook Express
Home Products DataNumen Outlook Express Repair Ampidiro amina fampirimana mailaka ao anaty mailaka ireo hafatra voafafa Outlook Express
Ampidiro amina fampirimana mailaka ao anaty mailaka ireo hafatra voafafa Outlook Express
Fanamarihana: Alohan'ny fandefasana entana dia alao antoka fa Outlook Express mail folder izay tokony hampidirina ireo hafatra dia mandeha tsara. Raha tsy izany, azafady backup ary esory ny rakitra dbx mifanaraka amin'ny folder mail.
Start Outlook Express ary taomy hivoha.
Safidio ny hafatra rehetra hafarana ao amin'ny lahatahiry output:
Soso-kevitra: Raha misafidy vondron-drakitra hafatra dia tazomy ny bokotra SHIFT, kitiho ny fisie hafatra eo an-tampon'ny vondrona, ary kitiho ny fisie hafatra eo ambanin'ny vondrona Raha te hanampy antontan-taratasy ho an'ny vondrona efa nofidinao, tano mafy ny lakilen'ny CTRL, ary avy eo safidio ireo rakitra hafatra tianao ampiana. Mba hanilihana ireo fisie fampirimana voafantina dia tazomy ny bokotra CTRL, ary kitiho ireo rakitra fisafidianana voafantina.
Tsoahy avy ao amin'ny lahatahiry ireo hafatra voafantina.
Arotsaho ao anaty tarmahazo folder mailaka ao amin'ny misokatra Outlook Express.
Aorian'izany dia azonao atao ny mampiasa ireo hafatra nafarana toy ny mahazatra ihany ao Outlook Express.
Ny dingana 1, 2, 3 amin'ny fizotran'ny fanafarana dia aseho amin'ity sary mihetsika manaraka ity: